နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 10, 2019
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအောင်စိုးသည် ESCAP မှ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဖြစ်သည့် Mr. Yann Louis DUVAL ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 10, 2019
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၀ ရက်နေ့ (၁၀:ဝ၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအောင်စိုးသည် ESCAP မှ
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအောင်စိုးသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံသံရုံးမှ Country Director of Department for International Trade ဖြစ်သူ Mr. Douglas Barnes ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၉ ရက်နေ့ (၁၄:ဝ၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအောင်စိုးသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံသံရုံးမှ
“စင်ကာပူနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံတို့၏ Dispute Resolution နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေး
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၉ ရက်နေ့၊ နံနက် (၉း၃၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးဝန်ကြီးဌာန၌ နှစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Thursday Talk ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့််တင်ရေးအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးသူက
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 10, 2019
U MIN THU, the Union Minister for the Office of the Union Government, met with staff of the Magway Region General Administration Department at the meeting hall of the regional combined office yesterday.
The fifth-day meeting of the Second Pyidaungsu Hluttaw’s 12th regular session was held at the Pyidaungsu Hluttaw meeting hall yesterday morning.
KNPLF celebrates 25 years of ceasefire in Loikaw
THE 25th anniversary of the Karenni National People’s Liberation Front’s ceasefire agreement was commemorated at their headquarters in Pankan village, Loikaw, yesterday morning.
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း ဟောင်ကောင်လွှတ်တော်ရုံး ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း Ms. Pauline Ng ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော် / Posted on May 10, 2019